दिक्षान्त स्तानकको आधारमा पुरोहित हुनुपर्छ : दलितले उचित अवसर पाउनुपर्यो । - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
दिक्षान्त स्तानकको आधारमा पुरोहित हुनुपर्छ : दलितले उचित अवसर पाउनुपर्यो ।
धर्म संस्कृत, वेद नजानेको, नपढेको पुरोहित हुनुसक्दैन ? हिन्दु धर्मावलम्बी बाहुनहरुको सभ्यतामा दुई प्रकारको आनिबानी छ । एक पुरोहित बाहुन छन् – जुन बाहुनको घरमा जन्मेको निहुँमा पुर्खाहरुको पुर्खौली व्यापार, हवन, पूजापाठ, कर्मकाण्ड, नौहारन (नामकरण), गृह प्रवेश, वास्तु पूजा ईत्यादी… लगायत सर्वविधीको काम सम्पन्न गर्ने । जुन आफ्नो बा–बाजेको पुश्तैनी काममा आफ्नो वंशागत कामको हक अधिकार मानेका छन् वा गर्छन । अर्को जो यिनी सबै रिति रिवाजको विपरीत पवित्र देविदेवताको पूजा गर्दैनन् । कुनै हवन कर्मकाण्ड, वास्तु, गृह प्रवेश कार्य सम्पन्न गर्दैनन् । उहाँहरु देविदेवताको निन्दा गर्दछन ।
व्यापार–व्यवसायको नाममा जुता–चप्पलको पसल, जनावर काटिने बुचरखानाको मालिक छन् । जाती र पेशाको आधारमा गर्ने व्यापार गैरदलित जातिले गर्नुपर्ने अवस्था सृजना छ । काम गरेर आफ्नो परिवारलाई पाल्ने बाहुनलाई कुनै आपत्ति छैन । तर जातको नाममा बाहुनको घरमा जन्म लिएको बच्चा असल पुरोहित हुनुसक्दैन – अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो ? एउटा बिग्रेको बेविचारी धर्म संस्कृत, वेद नजानेको, नलेखेपढेको बाहुन पुरोहित हुनुसक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन । समाज कल्याणको निमित्त पुरोहित जस्तो गरिमामय पदमा जो–सुकै ब्यक्ति भएको राम्रो देखिएन । पुरोहित जस्तो अध्यात्मिक ज्ञानको पढाई सरकारको नियमानुसार हाल स्कुलको पाठ्यक्रममा हुनुपर्छ त्यस्तै क्रममा डाक्टर, ईन्जिनियर, वकिल जस्तो सामाजिक अभियन्ता (Social Engineer) जस्तै उच्च शिक्षा पाएर सामाजिक अभियन्ताको रुपमा सरकारले वा विश्वविद्यालयले दिएको दिक्षान्त स्तानकको आधारमा समाजप्रतिको चिन्तनले पुरोहित जस्तो पद हुनुपर्दछ ।
यस्तो अबस्थामा यस पदको निमित्त दलित समुदायबाट दलित बुद्धिजीवी ज्ञानस्रोतले परिपुर्ण भएको व्यक्तिले पुरोहित हुने अवसर पाउनुपर्छ । यस्तो भएकोमा यिनी जतिसुकै नक्कली विभेदकारी पुरोहितको पलायन हुन्थ्यो, बदर हुने थियो । शायद समाजमा केही परिवर्तन आउथ्यो कि ? बदलिदो परिवेशसँगै समाजको सोच पनि परिवर्तन हुने थियो ? अहिलेको चलिरहेको प्रक्रिया त यस्तो भयो जस्तो जुगनु (जुनकिडी) उज्यालो देखाएर अंधियारोमा लिएर जान्छ !